“Kuma faraxsani Bayern Munich” – Douglas Costa oo doonaya inuu katago kooxdiisa – Gool FM
“Kuma faraxsani Bayern Munich” – Douglas Costa oo doonaya inuu katago kooxdiisa
Liibaan Fantastic February 6, 2017
(Munich) 06 Feb 2017 Laacibka garabka weerarka uga ciyaara kooxda Bayern Munich ee Douglas Costa ayaa si muuqata u sheegay inuusan ku faraxsanayn kooxdiisa.
Douglas Costa oo xiliciyaareedkii labaad ku qaadanaya kooxda reer Jarmal ayaa boos joogto ah ka waayay shaxda tababare Carlo Ancelotti.
Wuxuuna ciyaaray kaliya 8 kulan xiliciyaareed kan, Costa ayaa u sheegay wargayska Bild inuusan ku faraxsanayn xaalkiisa haatan ee kooxda Bayern Munich.
“Waxaan la fariisan doonaa tababare Ancelotti dhamaadka xiliciyaareedka si aan ugala hadlo wax walba oo quseeya mustaqbalkeyga” ayuu yiri Douglas Costa.
“Haatan ma dareemayo farxad badan, inaan sii joogo kooxda waxay ku xirnaan doontaa arimo yar oo ay ugu muhiimsantahay inaan helo daqiiqado badan iyo inaan dib u soo laabto si aan u noqdo laacib muhiim u ah kooxda”.
“Arimahaas ayaa go’aaminaya mustaqbalkeyga kooxda, hadii aysan taasi dhicin waxaan fiirin doonaa dalabyo waa wayn oo iga soo gaaray shiinaha iyo kooxaha kale ee yurub sida ingiriiska oo ah mid kamid ah horyaalada ugu wayn aduunka uguna cajiibsan”.
Arsenal FC oo niyada u dhistay Mohammed Elneny kaddib guuldaraddii xalay soo gaartay
Neymar oo aaminsan in Barcelona ay ku guulaysan karto Horyaalka